နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: သူငယ်ချင်းလို့ ဆက်မခေါ်ချင်
အရေးအသားလေး ညက်နေတာပဲ ... Online ပေါ်မှာ ဘယ်သူ့မှ သိပ်ယုံစရာ မကောင်းပေမဲ့ ဘလော့ဂ်ပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေကိုတော့ စိတ်တူကိုယ်တူ မဟုတ်တောင် ရင်ဘတ်တူသူများလို့ နားလည်ယုံကြည်ချင်စိတ်က ရှိနေတယ် ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ထ္ထုလေးတော့ ဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ... အရေးအသား ဘာမှပြောစရာ မလိုဘူးပဲ ...
အပြင်မှာ အဲဒီလို တိုက်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့
ဟုတ်တယ် တအားကို ဖတ်ကောင်းတာပဲ..။ ကြိုက်တယ် နောက်လည်းရေးဦး။ (အဲ ဇော်ကန့်လန့် မဖြစ်အောင်လည်း ဂရုစိုက်:P)
မ က ဒါမျိုးလဲ ရတယ်နော် ဟဲဟဲ မိုက်တယ်ရွေ နိပ်ဟ ဟိဟိ
ဟို မှုခင်း သည်းထိတ်ရင်ဖိုလိုဟာမျိုးလဲ လုပ်ဦးလေ နော်
အတွေးတူနေတာပဲနော်။ (တူနေသည်ဟုသာ ဖတ်ပါ၊ မည်သို့မျှ စွပ်စွဲခြင်း မရှိ)
ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါလားနော်။ (တူနေလို့ ပေးဖတ်တာပါ)
သံလွင်အိပ်မက်မှာ အပြေးသွားဖတ်လိုက်ပါတယ် အစ်မသိင်္ဂါကျော်ရေ... အရေးအသား သိပ်ကောင်းတာပါပဲ...
ဖတ်သွားပါတယ်။ စာအရေးအသား သိပ်ကောင်းတော့ သိပ်ကို ဖတ်လို့ ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ ဒါပေယ့် အဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တာ ကွာမှာ သေချာပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့ပြီး ညားကြတဲ့ စုံးတွဲနှစ်တွဲအကြောင်းကို ရေးချင်စိတ် ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ရေးဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
မဂ္ဂဇင်းကြီးတခုနဲ့ တူသလိုပဲလို့ ထင်နေတုန်းမှာ သံလွင်အိပ်မက် ဖြစ်နေတာကိုး...
စကားပြေအရေးလည်းကောင်းတာပဲဗျ။ အပေါ်က ကဗျာလေးတွေဖတ်ပြီး ကောင်းတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမှာ ချီးကျူးလာတာ။ စကားပြေကျတော့လည်း မညံ့တာတွေ့ပြန်ရော။ အရေးအသားနဲ့ အတွေးကိုတော့ သဘောကျတယ်။ ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်က အချစ်အတွက် လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ဘ၀တစ်ခုကို ငြင်းပယ်ကြတာ၊အွန်လိုင်းပေါ်က အချစ်ကိုတော့ သဘောမကျတာ အမှန်ပဲ...ဒါပေမယ့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့လည်း ချစ်နိုင်တာပဲ၊ အပြင်မှာတွေ့လည်း ချစ်နိုင်တာပဲ။ ချစ်တာချင်းအတူတူဘာကွာလို့လည်းမေးလာရင်လည်း မဖြေတတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ဇာတ်သိမ်းထားတာလေးကိုသဘောကျတယ်။ သူတို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကို ရေးမထားလို့..။ ရေးလိုရင် ၀တ္ထုရဲ့ ရသက တစ်မျိုးဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ပဲခင်မယ်ဆိုတဲ့သူကို အပြင်မှာ အိမ်ထောင်ဘက်အနေနဲ့ တွေ့လိုက်ရတော့ .......?
အွန်လိုင်းပေါ်မှာချစ်ပေမယ့် အပြင်မှာ ကိုယ်ငြင်းလိုက်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်က ကိုယ်ချစ်နေမိတဲ့သူဖြစ်နေတော့...?
တွေးစရာလေးတွေအများကြီးပဲ....ဘာပဲပြောပြော နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက် ဖတ်သွားပါတယ်....
ဖတ်လို့ တကယ်ကောင်းတယ်... အရမ်းကိုကြိုက်သွားတယ်... :)